PressReader - Ilanga: 2018-02-15 - INHLANGANO YESEKA I-SARS KOLWEMALI EMABANDLENI
INHLANGANO YESEKA I-SARS KOLWEMALI EMABANDLENI
Ilanga - 2018-02-15 - Izindaba - INTATHELI YELANGA
ISIPHUMELE obala yeseka isinqumo seSouth African Revenue Services (Sars) iFreedom of Religion South Africa (FOR SA) mayelana nokuthi lufakelwe izibuko udaba lomkhonyovu ekusingathweni kwezindaba zemali okusolwa ukuthi wenzeka emabandleni ezenkolo eNingizimu Afrika.
Lokhu ikusho esitatimendeni esithumelele abezindaba.
Le nhlangano ithi iyakuqonda ukuthi uphenyo lukhuthazwa futhi lwesekwe yiKhomishini yamaLungelo ezeNkolo, iziLimi namaSiko ngokombiko wayo esanda kuwethula othi kunezikhalo phakathi kwazo okukhona esokuphendulwa kwezenkolo “ibhizinisi” kanjalo nokuxhaphaza izinhlelo zenkolo yabantu.
“I-FOR SA ithi iyayeseka iCommission for the Promotion and Protection of Cultural Religious and Linguistic Communities (CRL) emsebenzini wayo wokugqamisa izenzo zokwephula umthetho okwenzeka kwezenkolo. Futhi besilokhu simile ekutheni inkululeko yezenkolo kayinakusetshenziswa njengezaba zokwephula noma zokugwema umthetho wezwe, kuwona okukhona nemithetho yentela.
“Umbono wethu esingakaze sigudluke kuwona uthi cishe kuzona zonke izimo, lezi zinkinga ziyoxazululwa ngokusebenzisa imithetho ekhona vele.
“Uphenyo lwabakwaSars luyisibonelo esihle esibonakalayo salokho njengoba benikezwe amandla futhi kubafanele ukuqoqa imali abayikweletwayo eyintela nokuphenya basebenzise umthetho oqonde kulowo muntu noma inhlangano engathobeli umthetho” kusho iFOR SA esitatimendeni.
Lesi sitatimente, esikhishwe ngesandla somqondisi weFOR SA, uMnu Michael Swain, siphetha ngokuthi ngokwenqubo kakufanele kube nokumelana nokuba abakwaSars noma yisiphi esinye isigaba sikahulumeni, ukuba basebenzise imithetho ekhona nokuthi uma kukhona abahongayo, lokho kukodwa kuyisizathu sokuba abakwaSars baphenye.